Kunzima kodilikelwa yindlu eNhlazatshe | News24
Kunzima kodilikelwa yindlu eNhlazatshe
UNksz Thokozani Zondi ohlala endlini ewayo eNhlazatshe. ISITHOMBE:nokulunga ngobese
IMPILO inzima kowesifazane waseNhlazatshe ohlala endlini yamapulangwe ewayo, emva kokushabalala kwephupho lakhe lokuthola indlu yomxhaso.
UNksz Thokozani Zondi (46) uhlala kule ndlu esentabeni nendodana yakhe eneminyaka eyisithupha, futhi basizwa omakhelwane uma bedinga ukusebenzisa indlu yangasese.
Uthe yize enonyaka efikile kule ndawo, ubesephila ngokuqasha emizini yabantu , emva kokuba kushabalale iphupho lakhe lokuthola indlu yomxhaso.
“Ngafaka isicelo sokwakhelwa umuzi womxhaso endaweni yase -France ngenkathi lolu hlelo luqala ukufika eminyakeni engaphezu kweshumi eyedlule. Yize bengisebenza edolobheni ngigada izimoto, bengiba naso isikhathi sokuyobheka emahhovisi ukuthi kuhamba kanjani ngesicelo sami, ebengilokhu ngitshelwa ukuthi akukakalungi.
“Kuthe ngo 2009 ngaphelelwa umsebenzi, ngagcina sengingasenayo imali yokugibela njalo ngiye edolobheni ukuyobheka isicelo sami.
“Ekugcineni sengiya, ngatshelwa ukuthi umuzi wami sewaze wanikwa omunye umuntu ngoba ngingatholakali, kanti negama lami lase licishiwe nasemagameni abanye abantu ababefake izicelo ngoba kuthiwa sengiwutholile umuzi.”
UZondi uthe kusukela lapho ube esehamba eqasha, okuphethe ngokuthi agcine esecele umuntu ozomakhela lo mkhukhu wamapulangwe. Uthe kumanje akasebenzi ndawo, futhi uphila ngemali yesondlo yendodana yakhe engu R310.
“Uma linetha kungena amanzi endlini futhi ngisho sivala ngokhadibhodi kuyazifanela.
“Sengiye ngisizwe ibona omakhelwane ngokudla uma ngixakekile. Njengoba kungena ihlobo nje, sizophesha sipheshile njengoba kusazoba nezimvula,” usho kanje
Ikhansela lakwa ward 19 uMnu Sipho Madonda uthe alukho uhlelo olukhona lwezindlu zomxhaso endaweni okwamanje, kepha uZondi angeza emahhovisi abo ukuze afakwe ohlwini lwabantu abafake izicelo zemizi yomxhaso.
Abafisa ukusiza bangathintana naye ku 071 048 3357